Kenyatta: "Soomaalida Dalkooda markey burburyeen, Dalkeenna ayay usoo jeesteen" | KEYDMEDIA ONLINE
22 November 2020 Cabdi Xaashi iyo C/kariin Guuleed oo kawada hadlay doorashadda
Kenyatta: “Soomaalida Dalkooda markey burburyeen, Dalkeenna ayay usoo jeesteen”
Nairobi (KON) - Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa difaacay Howlgalka ammaan ee ka socda dalka Kenya iyo Soomaalidii Maxkamad la'aan lagu hayay Garoonka Kasarani.
Kenyatta oo la kulmay Ciidamadda Booliiska Kenya ayaa sheegay in Ciidamada Ammaanka howshii laga rabay ay kasoo baxeen, wuxuuna yiri "Soomaalidu waxey doonayaan inay burburiyaan Dalkeena..."
Madaxweynaha Kenya ayaa iska fogeeyay dhalliisha Beesha Caalamka iyo Hay'addaha Xuquuqul Insaanka oo dhaliilay Howllgalkii ka dhacay Nairobi iyo Dadkii maalmo lagu hayay Garoonka Kasarani.
"Howlgalka waxa lagu bar-tilmaameedsanayaa dambiyada iyo Argagixisannimada (...) Maslaxaddeenu waxay ku jirtaa in aan dalkeenu ka sifeenaa Argagixisadda" Ayuu u sheegay Wargeys kasoo baxa Dalka Kenya.
Sidoo kale Kenyatta oo Khudbad ka horjeediyay tababar loosoo xirirayay ciidammo booliis ah ayaa yiri "Soomaaliya waa dal aan Dowlad laheyn muddo dheer (...) Waxey doonayaan in ay dalkeenna u burburiyaan sidii ay dalkooda u burburiyeen, anakana waxaan tusineynaa in aan iska celin karno..."
Hay'addo, Beesha Caalamka iyo Madax Kenyaan ah ayaa dhaliilay Howlgalkii Islii oo lagu bar-tilmaameedsanayay Muslimiinta iyo bulshada Soomaalida, isla markaana lagu xadgudbay xuquuqda aadanaha.
Shalay, Diyaarad kale, oo Dad Soomaali ah kasoo qaaday Magaalada Nairobi, ayaa Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho keentay 91 Qof oo isagu jira Rag, Haween iyo Caruur kamid ah Dadka lagu qabtay Howlgalka Islii, kuna xiran Garoonka Kasaraani.
Madaxweyne Deni ayaa gudi ka kooban 11 xubnood u magacaabey inuu soo qiimeeyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duufaanta iyo roobka is-wata.
Warar 23 November 2020 13:37
Rooble oo la kulmay bulshada Baydhabo